जो कोही आमा सन्तान बचाउन आफैलाई बाजी थाप्छिन् : यो सन्देशको भिडियोले संसारलाई रुवायो ! – Khabaarpati
October 25, 2020 goodmamLeaveaComment on जो कोही आमा सन्तान बचाउन आफैलाई बाजी थाप्छिन् : यो सन्देशको भिडियोले संसारलाई रुवायो !
उनीहरूका टिप्पणीहरू मार्फत आमाको मायालाई अभिवादन गरिरहेका छन् । साथै, केही प्रयोगकर्ताहरू भिडियो बनाउने व्यक्तिको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रयोगकर्ता द्वारा लेखिएको भिडियो लिनुको सट्टा, उक्त व्यक्तिले यो हाँसको जीवन बचाउनतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । यहाँ बाट हेर्नुहोस् भिडियो